“အိမ်မှာ အ၀တ်တွေပိုလျှံနေပြီး မ၀တ်တော့ဘူးဆိုရင် သမီးဆီပို့ပေးပါ. .ပြန်ပြင်ပြီး လှူပေးပါ့မယ်” ဆိုတဲ့ သမီးလေး နန်းဆိုင်လူ – Maharmedianews
သားဖြစ်သူကို ဘောလုံးအကယ်ဒမီမှာ ယုံယုံကြည်ကြည် အပ်နှံထားခဲ့ပေယ့် ကိုးတန်းဖြေဖို့ မိခင်က သွားတွေ့မှ ရင်ကျိုးခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်
ရောင်းစားခြင်း ခံခဲ့ရတဲ့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ထဲက ထူးခြားလှတဲ့ လိပ်ခုံးခန်းမ
“အိမ်မှာ အ၀တ်တွေပိုလျှံနေပြီး မ၀တ်တော့ဘူးဆိုရင် သမီးဆီပို့ပေးပါ. .ပြန်ပြင်ပြီး လှူပေးပါ့မယ်” ဆိုတဲ့ သမီးလေး နန်းဆိုင်လူ
“​​လေးဘက်​နာ လက်​​တွေ့သက်​သာတဲ့ ရွှေထက်တန်ဖိုးကြီးတဲ့…ဆေးနည်း​များ”.
သင့်ချစ်သူက သင့်ကို အရမ်းလွမ်းနေမှန်း သိနိုင်မယ့် ထူးထူးခြားခြား လက္ခဏာ (၃) မျိုး…
April 8, 2019 admin555
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ သီပေါမြို့တွင် အသက် (၁၅)နှစ်အရွယ် နန်းဆိုင်လူ၏ တစ်ပိုင်တစ်နိုင် လုပ်အားဒါနအဖြစ် အသုံးမလိုတော့သည့် အဝတ်အစားအဟောင်းများကို အများပြည်သူထံမှ လက်ခံရယူကာ ပြန်လည်ပြုပြင်ပြီး လိုအပ်နေသူများအား လှူဒါန်းမည့်အစီအစဉ်ကို စတင်လုပ်ဆောင်နေကြောင်း သိရသည်။
အဝတ်အစားဟောင်းများအား လှူဒါန်းလိုသူများအနေဖြင့် နန်းဆိုင်လူ၊ သီပေါပြည်သူ့ဆေးရုံ၊ ရှမ်းပြည်နယ်သို့ လိပ်မူ၍ သီပေါသို့ပြေးဆွဲသည့် မော်တော်ယာဉ်လိုင်းများဖြင့် ပေးပို့လှူဒါန်းနိုင်ပြီး တန်ဆာခပေးရန်အခက်အခဲရှိပါက ပစ္စည်းလက်ခံသူမှ ပေးဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လက်ခံရရှိသည့် အဝတ်အစားဟောင်းများအား ပြန်လည်ပြင်ဆင်ချုပ်လုပ်ရန်၊ လျှော်ဖွပ်မီးပူတိုက်ရန်အတွက် နန်းဆိုင်လူက လုပ်အားဒါနအဖြစ် လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ကာ တန်ဆာခပေးရန်အခက်အခဲရှိသည့် ပစ္စည်းများ ရွေးယူရန် ၎င်း၏စက်ချုပ်လုပ်အားခမှ အသုံးပြုသွားရန် စီစဉ်ထားကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ပြန်လည်ပြင်ဆင်သန့်စင်ထားသည့် အဝတ်အစားများအား စစ်ဘေးရှောင်စခန်းများ၊ ဆေးရုံတက်လူနာများမှ လိုအပ်သူများရှိပါက တစ်ဦးတစ်ယောက်ဖြစ်စေ၊ အစုအဖွဲ့လိုက်ဖြစ်စေ ပြန်လည်ပေးလှူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
နန်းဆိုင်လူသည် အသက် (၁၁)အရွယ်မှစ၍ ဟော်မုန်းသက်ရောက်မှုကြောင့် ရင်သားအဆမတန်ကြီးမားသည့်ဝေဒနာကို ခံစားခဲ့ရပြီး အသက် (၁၃)နှစ်အရွယ်ထိ ကုသမှုခံယူနိုင်ခြင်းမရှိဘဲဖြစ်နေရာ ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူနိုင်ရေးအတွက် သီပေါပြည်သူ့ဆေးရုံမှ ဆေးရုံအုပ်ကြီး ဒေါက်တာနန္ဒဝင်းက ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၉)ရက်နေ့တွင် အစိုးရ၏ပံ့ပိုးမှုဖြင့် (၇) နာရီနီးပါးကြာမြင့်သည့် ခွဲစိတ်ကုသမှုကို သီပေါပြည်သူ့ဆေးရုံတွင် အောင်မြင်စွာလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက် ပြန်လည်ကျန်းမာလာသည့် နန်းဆိုင်လူအား စက်ချုပ်ပညာသင်ကြားနိုင်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
လက်ရှိတွင် စက်ချုပ်ပညာသင်ယူတတ်မြောက်လာသည့် နန်းဆိုင်လူက အဝတ်အစားဟောင်းများအား ပြန်လည်ပြုပြင်ပြီး လိုအပ်သူများထံ လှူဒါန်းမည့်အစီအစဉ်ကို စတင်နေရာ အဆိုပါအစီအစဉ်အောင်မြင်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက် သီပေါပြည်သူ့ဆေးရုံမှ လိုအပ်သည့် ကူညီမှုများ ဆောင်ရွက်ပေးနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ အစီအစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ ဆက်သွယ်မေးမြန်း လှူဒါန်းလိုသူများအနေဖြင့် မယုဇန ဖုန်း ၀၉ ၇၉၃၀၃၃၁၆၀ သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ကြောင်း သိရသည်။
← “​​လေးဘက်​နာ လက်​​တွေ့သက်​သာတဲ့ ရွှေထက်တန်ဖိုးကြီးတဲ့…ဆေးနည်း​များ”.
ရောင်းစားခြင်း ခံခဲ့ရတဲ့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ထဲက ထူးခြားလှတဲ့ လိပ်ခုံးခန်းမ →
April 8, 2019 admin555 Comments Off on သားဖြစ်သူကို ဘောလုံးအကယ်ဒမီမှာ ယုံယုံကြည်ကြည် အပ်နှံထားခဲ့ပေယ့် ကိုးတန်းဖြေဖို့ မိခင်က သွားတွေ့မှ ရင်ကျိုးခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်
မိုးစက်မောင်မောင် လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ၁၁ နှစ်သားကတည်းက မန်း အကယ်ဒမီ ကို ရောက်ပါတယ်။ အခုတော့ ကလေး က အသက် ၁၅ နှစ် ရှိပါပြီ။ ၉ တန်းစာမေးပွဲ ဖြေချိန်ရောက် လို့
April 8, 2019 admin555 Comments Off on ရောင်းစားခြင်း ခံခဲ့ရတဲ့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ထဲက ထူးခြားလှတဲ့ လိပ်ခုံးခန်းမ
April 8, 2019 admin555 Comments Off on “အိမ်မှာ အ၀တ်တွေပိုလျှံနေပြီး မ၀တ်တော့ဘူးဆိုရင် သမီးဆီပို့ပေးပါ. .ပြန်ပြင်ပြီး လှူပေးပါ့မယ်” ဆိုတဲ့ သမီးလေး နန်းဆိုင်လူ
April 8, 2019 admin555 Comments Off on “​​လေးဘက်​နာ လက်​​တွေ့သက်​သာတဲ့ ရွှေထက်တန်ဖိုးကြီးတဲ့…ဆေးနည်း​များ”.
April 8, 2019 admin555 Comments Off on သင့်ချစ်သူက သင့်ကို အရမ်းလွမ်းနေမှန်း သိနိုင်မယ့် ထူးထူးခြားခြား လက္ခဏာ (၃) မျိုး…
ရောင်းချဖို့ ပင့်ဆောင်သွားပေမယ့် လမ်းမှာတင် ဘယ်မှ ဆက်ပင့်သွားလို့မရတော့တဲ့ ဒုတိယမြောက် ပြည်ချစ်ဘုရား
April 8, 2019 admin555 Comments Off on ရောင်းချဖို့ ပင့်ဆောင်သွားပေမယ့် လမ်းမှာတင် ဘယ်မှ ဆက်ပင့်သွားလို့မရတော့တဲ့ ဒုတိယမြောက် ပြည်ချစ်ဘုရား
သန္ဓေတားဆေးများက သားအိမ်ကင်ဆာ ဖြစ်ပွားမှုကို လျှော့ချပေးနိုင်
April 8, 2019 admin555 Comments Off on သန္ဓေတားဆေးများက သားအိမ်ကင်ဆာ ဖြစ်ပွားမှုကို လျှော့ချပေးနိုင်
နိုင်ငံတော်သမ္မတ အိမ်တော်ကို ကြွရောက်ခဲ့တဲ့ မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ကြီး
April 8, 2019 admin555 Comments Off on နိုင်ငံတော်သမ္မတ အိမ်တော်ကို ကြွရောက်ခဲ့တဲ့ မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ကြီး
ဖရဲသီးတင်ပို့ဖို့ ကုန်တင်ကားအကူအညီကို အစိုးရထံတောင်းဆိုပေမယ့် အဆင်မပြေလို့ ဖရဲသီးတွေကို ဓားနဲ့ခြမ်းပြီး ဆန္ဒပြ
April 8, 2019 admin555 Comments Off on ဖရဲသီးတင်ပို့ဖို့ ကုန်တင်ကားအကူအညီကို အစိုးရထံတောင်းဆိုပေမယ့် အဆင်မပြေလို့ ဖရဲသီးတွေကို ဓားနဲ့ခြမ်းပြီး ဆန္ဒပြ
ကဆုန်လတွင် မွေးဖွားသူများ၏ စိတ်နေစိတ်ထား နှင့် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များ
April 8, 2019 admin555 Comments Off on ကဆုန်လတွင် မွေးဖွားသူများ၏ စိတ်နေစိတ်ထား နှင့် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များ